Ònye ka m'bu? pt. 2: nakweere — njem Lee - Official Site
Ònye ka m'bu? pt. 2: nakweere
A video bụ site a-eso Ugbu a ogbako na Batesville, MS. Biko gbaghara ndị video na ọdịyo mma
Oge ikpeazụ anyị tọrọ ụfọdụ ntọala anyị ụka banyere njirimara. Anyị na-ekwu banyere ihe na-eme ka a mata ihe dị mkpa; tumadi na ọ bụrụ na anyị amaghị ndị anyị bụ, anyị ga-amaghị otú anyị na-kwesŽrŽ ebi. Na mgbe ahụ anyị na-ekwu banyere otú anyị na ndị mara mma mere, ma agbajikwa. Na n'ihi na anyị brokenness anyị na-kewapụrụ na Chineke na mkpa nke Onye Nzọpụta.
Nke a ụtụtụ anyị na-aga na-atụle otu n'ime ihe ndị mara mma eziokwu banyere-azọpụta site na Chineke, nke bụ ịbụ ndị e doro. Mgbe a na isi bụ ezie na, ntụle nke njirimara akọwa ntakịrị. Ihe niile anyị na-ekwu banyere ikpeazụ night- na anyị na-ahụ Chineke mere, mara Chineke, gbajiri, na umu-ogbenye-ndị a bụ eziokwu nke na mmadụ nile na Ụwa. The ihe anyị na-aga ikwu okwu banyere ugbu a bụ n'ihe ndị bụ eziokwu nke ndị na-Christ. Anyị na-now na-ekwu banyere otú anyị amata na-agbanwe mgbe anyị ghọrọ Ndị Kraịst
Na nso nso M na-agụ a biography nke Steve Jobs, onye nchoputa na ndị ọhụụ n'azụ Apple, nnukwu ụlọ ọrụ ndị dị n'ụwa. Ọ bụ n'ezie na-akpali iji na-agụ n'ihi na ọ bụ onye mmụta pụrụ iche na a crazy onye n'otu oge. Na ndụ ya na-akpali n'ezie mbụ na ndị ikpeazụ.
Ndụ ya malitere mgbe a nwoke na nwanyị zutere, nwere a nwa tupu ha lụrụ di, ma nye ya maka nkuchi. Nke a n'ezie nwere ike mmetụta na ya, n'ihi na ọ na-enwekarị mmetụta hapụrụ, na o mesịrị hapụrụ otu n'ime ụmụ nke ya.
Ma akpali akụkụ nke ahụ bụ na iji obiọma na ịhụnanya ezinụlọ si California nakweere ya. Ha n'ezie we jide ya na mesokwara ya dị ha nwa. Papa ya bụ engineer ma nye ya obi ekele maka mma-deere ihe. Na ndị mụrụ ya mere ọtụtụ ihe n'àjà iji nye ya ọ bụla ohere ịga nke ọma.
Ugbu a nnukwu akụkụ nke ya ịga nke ọma nwere na-eme na ndị na-nakweere ya. Ha yiri ya. Ọbụna n'ụzọ ha n'otu ebe ya bụla whim mee ka àgwà ya ma okwukwe nke na ọ pụrụ ime ka ihe ọ bụla mee.
The mara mma ihe banyere doro ya bụ na ndị mmadụ nwere ibu ọrụ ọ bụla na-a ekpebie na-na ibu ọrụ. Ha na-ahụ a nwa nwere ihe ọ bụla na-enye, na ha na-enye ya ihe niile ha nwere. Na nwa nọ ná mkpa na ha ekweta na-izute mkpa ndị ahụ. Ha na-agaghị iwu ji na-eme ya, ma ha na-eme ya n'ihi ebere.
Chineke doro nke ndị mmadụ dị ka m na gị yiri n'ọtụtụ ụzọ. Ọ dịghị Chineke ịmụta anyị. Chineke na-adịghị iwu ji. Anyị nwere ihe ọ bụla na-enye ya. Anyị nọ nnọọ ná mkpa, Chineke ekwewokwa nkwa izute mkpa ndị ahụ.
Ma nnukwu ihe dị iche bụ na Chineke na-adịghị anakwere random ụmụaka o zutere. Chineke na-n'ịkpa nnupụisi bụ ndị mejọrọ ya. Chineke na-n'ịkpa omempụ. Chineke na-n'ịkpa mara mma ma gbajiri mmehie. E nweghị doo dị ka Chineke n'ihi na e nweghị ịhụnanya dị ka Ya.
Ka anyị lee John 1:10 na-amalite oge anyị ọnụ.
"Ọ bụ na ụwa, na ekèkwara uwa site n'aka-ya, ma ụwa amaghị ya. Ọ bịara ya, na ndị nke ya anabataghị ya. Ma ka ndị niile nabatara ya, onye kweere n'aha Ya, o nyere ikike ịghọ ụmụ Chineke, ndi amuru, ọ bughi site n'ọbara, ọ bughi kwa site n'ọchichọ anu-aru, ọ bughi kwa site n'ọchichọ nwoke, ma nke Chineke. " (John 1:10-13)
m. Mụrụ Ezinụlọ Ya
Otu n'ime ihe ndị kasị nkịtị echiche na mba dị ka nke anyị bụ na onye ọ bụla bụ nwa Chineke. Ma nke ahụ abụghị ihe Bible na-akụzi. The Bible na-akụzi na mgbe anyị na-amụ, na anyị ụmụ Chineke, ma ndi-iro nke Chineke. Na Bible na-akụzi ihe ọzọ na-eyi egwu, na anyị na-amụ ụmụ ekwensu. Nke a apụtaghị na anyị nwere mpi, ma na anyị na-eso ekwensu na na omume anyị anya ọzọ dị ka ya karịa ka Chineke.
Ugbu a ọtụtụ ndị taa ga-asị na ada ụda mkpari na anabataghi. "N'ezie, anyị na-na na niile ụmụ Chineke,"Ha nwere ike ịsị. Ọfọn, ee, anyị na-niile Chineke mere na ya, na uche anyị na-ụmụ ya, ma Bible pụtara ọtụtụ ihe ndị ọzọ mgbe ọ nta banyere ịbụ ụmụ Chineke. Ọ bụ ihe yiri nke ndị dị iche n'etiti ịbụ a nwa nna mụrụ, ma ọ bụghị n'ezie ịbụ na ndu ha, tụnyere mmadụ ịnọ mmadụ papa, -ahụ ha n'anya, na-egwuri egwu ha, na-elekọta ha mkpa ha.
Ọ dịghị ka mgbe a mụrụ gị na ezinụlọ gị, nke na-emekarị itịbe na-akpaghị aka. E nwere na-a mgbanwe, A na-amụ, a akakabarede. Na ị bụghị a bụ na nwa nke Chineke n'ihi na ndị mụrụ gị bụ, ma ọ bụ n'ihi na ndị enyi gị na-, ma ọ bụ n'ihi na ị chọrọ ka i.
Ọ bụrụ na anyị na-aga na-a nwa Chineke, anyị na-adiaha n'ime ezinụlọ ya. Ma, olee otú nke ahụ si eme?
Ọ bụrụ na ị na-atụle onwe gị ịbụ a Christian, Achọrọ m ka ị jụọ onwe gị ihe mere. Ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ, m ga-on a ụgbọelu, na m ga-ajụ ndị ọzọ m ma ma ọ bụ na ha nwere a mmekọrịta ya na Chineke. Na ha na-emekarị asị ee, na m ga-ajụ ha ihe mere. M ga-ajụ ha ihe ha weputara nkuzi na on? Ọ bụ na-eje ije ruo ihe wara wara, ma ọ bụ ugboro a ekpere, ma ọ bụ na-agụ a amaokwu?
Amaokwu anyị dị na-agụ na-ekwu, mara n'ụzọ doro anya, "Ka ndị niile nabatara ya, onye kweere n'aha Ya, o nyere ikike ịghọ ụmụ Chineke…"Ịghọ a nwa Chineke na-eme mgbe ị na-enweta Jesus. Ma olee otú i na-enweta Jesus? Site kwere n'aha-Ya.
Ya mere chee echiche Chineke dị ka a bara ọgaranya philanthropist emi awade ịmụta ọ bụla otu mmadụ na Earth dị ka nwa ya. Na naanị ihe ọ na-ajụ bụ na ị na-enweta nwa-ya site n'okwukwe. Na na na ezinụlọ.
Kedu ihe nke ahụ pụtara?
Ugbu a, anyị na-achọpụta na ọ dịghị nnọọ ikwu "ikwere na-ezi ihe."Ọ na-ekwu"kwere n'aha-Ya."E nwere otu nnukwu ihe dị iche n'etiti ikwere na onye ozizi na-atụkwasị obi na ihe n'ezie na onye. John na-ekwu na enweta na Jizọs tụkwasịrị onye-kwere n'aha-Ya, na ihe nile o kpughekwara na ya.
Ya mere enyi, Achọrọ m ka unu mara na ọ bụ ezughị n'ihi na ị na-ekwu, "Ekwere m na ụfọdụ nke ozizi Jizọs, M kwere na anyị kwesịrị ịhụ ibe ha n'anya, M kwere na anyị gara chọọchị. "John na-ekwu na-anata ya pụtara kwere n'aha-Ya! -Atụkwasị obi n'okwu Jesus. All nke Jesus.
N'ikpeazụ, e nwere ụdị mmadụ abụọ mgbe ọ na-abịa Jesus: Ndị jụrụ ya n'ihi na ha hụrụ ọchịchịrị na ndị ahụ kwere na aha ya.
“Ka m ji bịa n'ụwa dị ka ìhè, nke mere na Onye nēkwere na Mu wee ghara ịnọgide n'ọchịchịrị.” (John 12:46)
Gịnị Bụ Ezi Okwukwe?
Mgbe ụfọdụ, anyị na-eche na okwukwe na-ekwere ihe ụfọdụ banyere Jesus. Amaara m na nke ahụ bụ ihe m chere. Ma okwukwe n'ezie ịtụkwasị ya obi. Ọ na-ebe ọ maara eziokwu banyere onye ọ bụ na ihe o mere, ekwere ihe ndị mere eme, na-atụkwasị obi ha-ịkụ nzọ ndụ gị na ha.
Ị nzọ ndụ gị on a? Unu jere njikere atụfu ihe nile mara Christ?
Ị hụrụ na ọ na-agwa anyị a obere bit banyere ihe ọ pụtara na-a nwa Chineke, na-akọwa ha dị ka "ndị na amuru, ọ bughi site n'ọbara, ọ bughi kwa site n'ọchichọ anu-aru, ọ bughi kwa site n'ọchichọ nwoke, ma nke Chineke. "
Ọ na a gwa ma ọ bụrụ na anyị na-aga na-ụmụ Chineke, anyị na-ejikere ịlọ ụwa. Ọ pụtara na anyị na-ka ọ dị ọhụrụ. Anyị na ndị agadi onwe-anwụ anwụ. Oge mbụ a mụrụ anyị anyị abụghị nri, otú anyị mkpa ka a mụọ ya nile ọzọ.
John chọrọ ka anyị mara na a mụrụ ya dị iche karịa anyị mbụ. Ọ na-enye ọtụtụ qualifiers iji jide n'aka na anyị ghọtara na. "Ọ bụghị nke ọbara" -ọ chọrọ ka anyị mara na nke a nwere ihe ọ bụla na-eme na eke n'usoro ọmụmụ ma ọ bụ ọmụmụ. "Ọ bụghị nke anụ ahụ" -ọ chọrọ ka anyị mata ya ọ bụghị na ụmụ mmadụ agụụ mmekọahụ. "Ma ọ bụ nke uche nke mmadụ" -ọ chọrọ ka anyị mara na a mụrụ ya adịghị butere site nwoke. Omumu ohuru nke a bu nke Chineke!
A mụrụ ọzọ a abụghị nnọọ okwu na ndị mmadụ wee na. Ọ bụ onye eziokwu n'ihi na ndị na-na na na tụkwasịrị Kraịst. Ma ọ bụ ihe dị adị nke na agbanwe ihe niile. Chineke na-enye unu obi ọhụrụ, nakwa dị ka anya ịhụ ya, na mmụọ ya bi n'ime unu. Ị bụ a ohuru kere eke.
Ọtụtụ ndị chere na i gagh i enwe ike iji nweta gara aga na ọ bụ mmehie na-ezighị ọtụtụ ndị chere. Ị bụ onye e kere ohu ejikere ịlọ ụwa n'ime ezinụlọ nke Chineke.
Ihe ọhụrụ ka mere. Ị na-adịghị amasị onye ọ bụla ọzọ ọzọ, ya mere, na-agbalị ịdị ka ha. Ị sonyeere a ọhụrụ otu na ọhụrụ ihe mgbaru ọsọ. Anyị na-enwe na-aghọta na na ọhụrụ amụ nwa, anyị na a na nakweere mere a ezinụlọ. Otú i nwere òtù ezinụlọ, ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị n'okwukwe. hụrụ ha n'anya. gbaa ha ume. Anyị na-ebe a iji na-enyere ibe-eso Jizọs.
II. Emeso dị ka Ọkpara Ya
Mgbe a na ezinụlọ adopts onye, ha tinye mgbalị dị ukwuu iji jide n'aka na nwa e kuchiri ekuchi-adịghị dị ka ha na-na na nwa e kuchiri ekuchi. Ha achọghị ka ha na-eche dị iche iche na ihere ma ọ bụ na-amasị ha abụghị nke. Kama ha na-achọ na-emeso ha dị ka ha na ụmụaka ndị ọzọ. N'otu ụzọ, mgbe Chineke jiri mere anyị dị ka umu-ya ndikom na umu-ndinyom, ọ na-emeso anyị dị ka Ọkpara ọ mụrụ naanị, Jesus.
Ị NỤTỤWO ka mmadụ na-ekwurịta banyere a ntụkwasị obi enweta ego na nwa? Nke a bụ a bụ onye ndị mụrụ bara ọgaranya, na dị nnọọ site na nke bu eziokwu na a mụrụ ha, ha na-na now ọgaranya kwa. Ya mere, ndị ewe iwe megide ha, n'ihi na onye ọ bụla ọzọ nwere ịrụsi ọrụ ike ya maka ihe ha nwere. Ma eleghị anya, ha na-enweta n'ụlọ ha na ha ntụsara, ma ha nwere na-arụ ọrụ ha dum ndụ. N'akụkụ aka nke ọzọ, a ọgaranya nwa ewu mgbe nwere na-arụ ọrụ a ụbọchị ná ndụ ya ma ọ na-eme mma karịa onye ọ bụla ọzọ. Ọ nwere niile uru na-enweghị na-eme ihe ọ bụla nke ọrụ.
n'ụzọ ime mmụọ, anyị na-ntụkwasị obi enweta ego ụmụ ọhụrụ. Dị nnọọ site na ọdịdị nke eziokwu ahụ bụ na anyị na a na ejikere ịlọ ụwa n'ime n'ezinụlọ Chineke, anyị na-enweta akụ ime mmụọ. Anyị na-na biri megidere ya iwu, na anyị na-na nupụụrụ ya, ma mgbe anyị na-etinye okwukwe anyị na Kraịst anyị na-niile uru Jesus natara. Ihe niile ọrụ Jizọs rụzuru na-agafere anyị.
Ka anyị kwuo banyere ole na ole n'ime ihe ndị ahụ.
1. ezi omume
"N'ihi na anyị hà, o mere ya ka ọ bụrụ mmehie na-maghị mmehie, nke mere na n'ime ya ka anyị wee ghọọ eziomume Chineke. " (2 Ndị Kọrịnt 5:21)
Jesus Switched ebe anyị na. Ọ na mesoo dị ka anyị, na anyị na-emeso dị ka ya. Bụghị na-eju? Mgbe ị na-Chineke nakweere, ị na-hụrụ dị ka ezi omume ya-ọ bụghị nanị dị ka a ruru unyi, -abaghị uru mmehie, ma dị ka ezi omume.
Ọ bụ dị ka onye Switched si na ule results. Anyị na-enweta na A + ọ bụ ezie na anyị na-emezughị, na Jesus enwe na ntaramahụhụ maka gwụsịrị.
Amaara m na mgbe ụfọdụ mgbe enwebeghị m na Okwu ụzọ m kwesịrị, ma ọ bụ mgbe m na e na-ekere òkè Oziọma na ndị ọzọ dị ka m kwesịrị, M na-amalite na-eche dị Chineke bụ ewere m iwe. Na mgbe ahụ na-eme ka m si ekpe ekpere, n'ihi na m na-eche dị ọ chọghị ịnụ ihe n'aka m. N'ime oge ndị ọ bụ aka icheta na mgbe ọ nakweere m, o nyere m ezi omume nke Jesus.
Ya mere, ọ bụghị na ewere m iwe ọzọ; ya ut o ime soro m na-Christ. My mmehie ofụhọ ya, ma m ntụpọ na ezinụlọ ya anaghị agbanwe agbanwe. M na-emeghị ihe ọ na-ewe iji ruo ebe ahụ, ọ dịghịkwa ihe m pụrụ ime nke ahụ ga-ewepụ m. M nnọọ mkpa ịnọgide na-atụkwasị ya obi na chegharia.
Nke a na-atọhapụ m site n'agbụ nke ịgbalị ime ihe ndị ọzọ niile. M na-esiri onye ọ bụla na-eche echiche ukwuu nke m. Na ihe kasị enyere m aka bụ icheta na ọ dịghị m mkpa ha ihu ọma, n'ihi na m na-ama nwere Chineke. M ugbua na ezi n'anya ya. Enwere m niile ihu ọma m ga-mkpa mgbe ọ bụla
Ọ bụ a n'ụlọ mkpọrọ na-ebi ndụ dabeere na ihe ndị ọzọ na-eche. Chineke na-ebuli gị na Christ, ya mere, ka na-ezu. Ị nwere niile ihu ọma ị ga-mkpa mgbe ọ bụla.
2. Ndu Ebigh-Ebi
Anyị na-na akwụ ọnwụ ebighị, ma n'ime Kraịst anyị ga-esi adị ndụ ebighị ebi na Chineke. Anyị na-enweta ndị dị ndụ jupụtara ndụ dị ka e zubere ka ọ ga-dịrị ndụ. Anyị na-ebi nnọọ ofufe nke Eze ruo mgbe ebighị ebi.
Ndụ a bụghị ihe niile anyị nwere. Gịnị mere anyị ji ebi ndụ dị ka na? Anyị eleghara ihe o mere n'ihi na mgbe ebighị ebi chụwa ihe ndị na-atọ ụtọ ugbu a. Mana gịnị mere? Nke a abụghị ihe kasị mma anyị ga-esi. Nke a bụ oge anyị nwere n'ụwa a inye Chineke otuto ruo mgbe anyị na ndị ya n'eluigwe.
Mgbe anyị chere echiche nke a niile bụ na anyị ga-esi na anyị nwere ime ihe niile anyị nwere ike ime iji dị nnọọ onwe anyị obi ụtọ. Ma mgbe anyị maara na nke a bụ nanị ihe atụ anyị ga-emefu oge anyị etinye na anyị ebighị ebi.
3. nna hụrụ ha n'anya & Care
M hụrụ n'anya na nwa m nwoke n'anya nke ukwuu. Na m ga-eme ihe ọ bụla n'ihi na ya. Chineke hụrụ anyị n'anya, ga-enye anyị nnọọ ihe ọ bụla na nke ahụ bụ mma ka anyị na. Ya mere, na-echeta ma ọ bụrụ na e nwere ihe ị na-adịghị ugbu a, ọ bụghị n'ihi na Chineke abụghị ike inye ya. Ọ bụ n'ihi na ọ bụ adịghị mma n'ihi na ị.
Ihe àmà ọzọ nke eziokwu ahụ bụ na anyị na-emeso dị ka ezi ụmụ Chineke bụ eziokwu na anyị nwere ike mgbe iche ịhụnanya Ya. Anyị dị n'otu na-Jesus, na Jesus ada anyị Nna. N'ihi na anyị na na Jesus anyị nwere ike mgbe a ga-kewapụrụ na Chineke.
ajụjụ: Ya mere, onye nwere ike ikewapụ ụmụ Chineke site n'aka Ya? azịza: Ọ dịghị onye pụrụ ikewapụ ụmụ Chineke si ịhụnanya Ya.
"N'ihi na m maara nke ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ isi, ma ọ bụ ihe ugbu ọbu ihe gaje ịbịa, ma ọ bụ ike, ma ọ bụ ịdị elu ma ọ omimi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na ihe niile e kere, ga-enwe ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke na Kraịst Jizọs Onyenwe anyị. " (Ndị Rom 8:38-39)
Ọ dịghị ihe nile nke Creation pụrụ ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke na Kraịst. Anyị bụ ndị ya ndikom na umu-ndinyom.
Mgbe unu hà ka a nwa ewu, Ọ dịtụla mgbe i nwere onye na-enye gị ihe, mgbe ahụ agbali kwa iwepu ya azụ? Nwanne m nwaanyị na-eme nke a ka m. Ọ ga ihe ọ dị ka ya n'ezie, na mgbe ahụ ọ ga-enye m. Ọ bụ ahịhịa ya. N'ihi ya, m ga-esi ya, dee aha m n'elu ya, na-enweta ya-na ọ bụ nke m. Ọfọn ugbu a na m nwere ya na m na n'ezie na-anụ ụtọ ya, ma ugbu a ọ na-ele m ụtọ na ọ na ọ chọrọ ka ọ laghachi azụ. good? Ọfọn ebe tupu m emeghị ihe ọ bụla pụrụ iche nkekọ ya, ugbu a m na-eme. Ọ bụ nke m. M dere aha m na ya na achọpụtabeghị fun ụzọ na-egwu na ya. Otú ahụ ka Chineke. Ugbu a anyị na-na na ya, ọ na-azọrọ anyị. ọ na-ekwu, "Mine!"Ọ dịghị onye pụrụ ịpụnara anyị pụọ n'ebe ọ nọ na ịhụnanya ya.
Anyị ga-echeta nke a mgbe anyị na-aga site isi ike. Ọ dịghị onye n'ime anyị ike nwere ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke. n'ezie, mgbe ụfọdụ ndị ahụ siri ike na-egosi na nke bu eziokwu na anyị bụ ụmụ nke Chineke.
Chineke adịghị nnọọ inye anyị stof, ma ọ na-enye anyị onwe. Mgbe anyị na-ahapụ ya aga mgbe agụụ mmekọahụ na mmezu, anyị na-ahapụ ata ihe na search nke a adịgboroja. I nwere ike izute na Chineke na-anụ kwa ụbọchị na okwu ya. Ọ ga-aṅa ntị n'ekpere gị ma zaa ha. Ọ bụrụ na ị na-abịaru ya nso ọ ga-abịarukwa unu nso.
III. Ime ihe kwekọrọ Ọkpara Ya
Ọ dịghị ahapụ anyị ebe anyị nọ. -Emekwa ka anyị ọzọ ka Ya. Ya mere, ọ bụghị naanị otú o si emeso anyị dị ka Jesus, ma ọ na-eme ka anyị dị Jesus.
Anyị na-ekwu banyere ebe e mere n'onyinyo Chineke, a na-agbajikwa. Ọma Jesus bụ nke zuru okè n'onyinyo Chineke, na Chineke kwekọrọ n'ụzọ anyị n'onyinyo ya site na-eme anyị ka Jesus. Anyị na-amalite anya dị ka anyị na-na ezinụlọ.
Anyị na-ekwu banyere ụdị okwukwe nke ahụ bụ njikere ịhapụ ihe niile na nzọ ihe niile on Jesus. Mgbe Chineke jiri mere anyị, ọ dịghị ahapụ anyị ebe anyị nọ.
M na-agwa okwu ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ ụbọchị banyere ikwere na Jizọs, na otu onye si, "Ekwenyere m, ma m ka na chọrọ nwere fun mgbe ụfọdụ. Ọ bụ ya mere m na-eme ọ bụghị mgbe niile ka mgbe Kraịst. "E nwere ike ịbụ ihe ụfọdụ o kweere, ma ụdị okwukwe Baịbụl na-akpọ maka bụ unu niile. Ọ na-agbanwe otú i anya na mmehie gị. Ị hapụ ya.
Gee ntị n'ihe Pọl kwuru:
"Ùnu amaghị na ndị ajọ omume agaghị eketa alaeze Chineke? Ọ bụghị eduhie; ma ndi na akwa iko, ma ọ bụ na-ekpere arụsị, bụ ndị nwere nwunye, ma ọ bụ ndị na-eme nwoke idina nwoke, ma ọ bụ ndị ohi, ma ọ bụ ndị anyaukwu na, ọ bụ ndị aṅụrụma, ma ọ bụ ndị na-ekwujọ, ma ọ swindlers ga-eketa ala-eze Chineke. Na ndị dị otú ahụ bụ ụfọdụ n'ime unu. Ma unu sachara, ị na-edo nsọ, ị na-agu n'onye ezi omume n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na site na Mọ nke Chineke anyị. " (1 Ndị Kọrịnt 6:9-11)
Ihe ndị ahụ bụ egosi ihe gara aga. Anyị na-adịghị kọwara ihe ndị ahụ ọzọ.
Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị hụrụ nwa ọhụrụ na-agwa ya nne na nna ihe na-eme? Crawling gburugburu a ụlọ ịtụ nne na nna ya gburugburu? Ị ga-eche na ọ bụ crazy! Gịnị mere? N'ihi na ha bụ ndị nne na nna, ma ha na-eme ka nwa. It's mwute mgbe ndị mmadụ nwere ụfọdụ ike na ùgwù ma jụ eje ije na ya. Ọ bụ ọbụna crazier maka a Christian-ebi ndụ mmehie. I nwere ike n'ebe mmehie na ị na a na nyere ihe ùgwù ije ije nnwere onwe. Gịnị mere ị ga-eleghara ya na ike na-eje ije ohu?
dị ka Ndị Kraịst, Chineke emeworị anyị nsọ. Ugbu a, anyị na-agbalị ime ka ndụ anyị iji na-egosipụta ndị anyị bụ n'ime Kraịst kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-Christ na ị bụghị onye ụgha. Ị na-adịghị a idina ụdị. Ị bụghị onye ohi. Ị bụ onye senti. Na stof nwere ike ọbụla n'isi gị ọzọ.
Amaghị m ihe ndị na-agbaso mgba na ebe a taa, ma ọ bụ mkpa ịghọta na a status mgbanwe mere ọ bụrụ na ị na Christ. M na-echeta a oge m Christian ndụ mgbe m na e jide a jọgburu onwe okirikiri nke mmehie. Na-adị m ka m nọ na ohu mmehie m. Na nnukwu akụkụ nke m uto ịghọta eziokwu a: na m na-adịghị eme mmehie. M na a tọhapụrụ gara aga ohu
Ihe Chineke Na-eche Kasị Ihe
Ndị isi ihe Chineke na-eme ná ndụ gị na-eme ka ị dị nsọ. Ihe karịrị ọ bụ nchegbu banyere gị nkasi obi, ọ bụ nchegbu banyere gị ịdị nsọ. na Ndị Hibru 12, onye dere okwu banyere ịdọ aka ná ntị ná ndụ anyị. Mgbe ụfọdụ, obi ga na-afụ ụfụ. Ma o doro anya na mgbe anyị na-aga site na mgbe ihe siri ike, ọ pụtaghị na Chineke adịghị ahụ anyị n'anya. N'ezie ọ hụrụ anyị n'anya site n'inye anyị mgbe ihe siri ike. Okwu a ịdọ aka ná ntị nke ahụ na-eji pụtara n'ụzọ bụ isi ọzụzụ. Chineke na-akụziri anyị otú na-eme ka anyị ṅomie Jizọs. Ọ na-eme anyị nsọ.
Ọ ga-abụ enweghị ịhụnanya nke Chineke na-agaghị azụ anyị ma mee ka anyị ọzọ nsọ. Ọ pụtara na anyị na-adịghị umu-ya ndikom. Mgbe ụfọdụ, ọ ọbụna na-achụpụ adọ aka ná ntị anyị n'ihi mmehie. Mgbe ị na-emehie, na e nwere ndị jọgburu onwe ya pụta, -adịghị-ahụ dị ka nanị ihe ndabakọ. Ị kwesịrị ị na-atụle na Chineke na-ọzụzụ ị. Ọ na-eme gị ihe mmehie na-ewetara, na ọ na-n'ịkpụzi iji mee ka unu ihe dị ka Kraịst. Ọ bụ dị ka anyị bụ scrawny, na ọnwụnwa ime ka anyị na buff. Jesus zuru okè ime mmụọ buffness, na Chineke chọrọ ka anyị dị ka ya.
N'ikpeazụ nke a bụ ọrụ Chineke. Ya emee ya site na anyị mgbalị, ma ọ bụrụ na ị na Christ ọ nwere ike na a ga-eme ya. N'ihi ya, anaghị gabiga ókè daa mbà onwe gị. I nwere ike na-eche dị gị enweghị ike ịgbanwe onwe gị, na nke ahụ bụ eziokwu. Gaa ebe Chineke kwere ná nkwa na ọ ga-agbanwe ị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye Kraịst, na ọ dị mkpa mara onye ị bụ na ihe nkwa Chineke bụ maka gị. Ị na e kuchiri ekuchi. Ị bụ a nwa Chineke.
My nwa ọkọkpọhi a otutu uru ịbụ nwa m. M na-elekọta ya, -enye ya, -eme ka n'aka na ọ na-nri. Otu ndị ahụ na ihe ùgwù na-adịghị chụọrọ nnọọ nwatakịrị ọ bụla na gburugburu. Ma nke ahụ apụtaghị na ị nwere ike ghara nakweere.
The Gospel bụ ihe kasị nanị na yana idobe okirikiri ozi na ụwa. Ngọzi ndị a naanị na-aga ụfọdụ, ma Mmadụ nile nwere ha. Tụkwasị Christ. Chineke ga ịmụta ị. Ọ ga-enye gị ihe ị na mgbe akwụ-mbụ ya enyi.
1. Ọ dị uru nke ya, ya mee ma ọ bụrụ na anyị na-ụmụ Chineke?
2. Ihe di iche iche nke iche ga-eru ndị m na-achọpụta ma ọ bụrụ na m na Chineke ezinụlọ?
3. Gịnị ka i kasị ekele maka banyere ịbụ a nwa Chineke?
4. Olee otú eziokwu ahụ bụ na ị na a na ohu mmehie ịgbanwe otú i ya ọgụ?
5. Olee ọrụ Okwu Chineke egwu na-aghọ ndị ọzọ dị ka Jizọs?
6. Gịnị ka ị na-eme ma ọ bụrụ na ị na-agaghị na-eto eto dị ka gị ga-?